सबै पालिकामा कोरोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली। – Gorkhali Voice
सबै पालिकामा कोरोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली।
२०७७, १२ बैशाख शुक्रबार २०:२८
डा. देवकोटाले भने, ‘कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उहाँहरु त्यहाँ परिचालन हुनुहुनेछ ।यो समूहमा स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिले पठाइने छ । जनशक्ति अपुग भएमा मात्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा माग गर्न सकिने डा. देवकोटाले बताए ।
‘खासगरी जमाती टोली भुल्के र मस्जिदमा आउनु अगाडि उहाँहरु बसेको मस्जिद वरिपरि बसेका परिवारहरुबाट यो नमूना संकलन गरिएको छ’ डा. देवकोटाले भने, ‘अरु थप नमूना परीक्षण गर्ने योजना छ । त्यो अनुसार नमूना संकलन गरिरहेका छौं ।’उनले करिब १५ सय स्वाब नमूना संकलन गर्न प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली परिचालन पनि गरिएको जानकारी दिए ।